कपुरकोट गाउँपालिकाको यस्तो छ प्राथमिकताका क्षेत्रहरु « Nagarik Khabar
कपुरकोट गाउँपालिकाको यस्तो छ प्राथमिकताका क्षेत्रहरु
प्रकाशित मिति : 1 January, 2021 1:44 pm
सल्यान । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये तीव्र विकास र सही नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्षमा नेकपाबाट निर्वाचित युवा नेता भीम बहादुर सेन गाउँपालिकामा मात्र नभएर अन्य स्थानीय तहमा समेत लोकप्रिय छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेएका उनले खासगरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् । लगनशील, हँसिलो र सरल स्वभावका सेन जनउत्तरदायी शासन सञ्चालन तथा विपद् व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा समानुपातिक विकासमा सक्षम भूमिका खेलेकै कारण चर्चामा छन् । समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष सेनसँग राससका सल्यान समाचारदाता रमेशकुमार वलीले गरेको कुराकानीको अंशः
खास गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य र समन्वयमा छु । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम पनि कायमै छ । आवश्यक सुरक्षा सावधानी, सतर्कतासँगै समाजमा सचेतना फैलाउने कार्यलाई जारी राख्दै विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी नागरिक केन्द्रित दिगो, भरपर्दो विकास गर्ने भन्ने विषयतिर नै म केन्द्रित छु ।
पछिल्लो पटक कोरोनाको संक्रमण जिल्लामा व्यापक रह्यो तर पनि यहाँ आफ्नो गाउँपालिकामा पूरै नियन्त्रण गर्न सफल हुनुभएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?
कपुरकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाका पनि हो । यस नाकाबाट भारतलगायत विभिन्न देशबाट फर्केका तथा देशका विभिन्न शहर बजारबाट मानिसहरु कर्णालीका विभिन्न जिल्ला भित्रने गर्छन् । यसर्थ कोरोनाको जोखिम पनि देखिने भइहाल्यो । यही कुरालाई ध्यानमा राखी हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा गत चैत १ गतेदेखि नै कपुरकोटमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर २४ सै घन्टा ज्वरो जाँच तथा आवश्यक परामर्श दिने कार्य गरेका छौँ ।
चैत १ देखि असार मसान्तसम्म ५३ हजार ६ सय ९८ पुरुष र १५ हजार ९ सय ९३ महिला गरी जम्मा ६९ हजार ६ सय ९१ जनाको स्क्रिनिङ गरियो । यसका साथै वडाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा सबै वडाहरुमा सतर्कता समिति गठन गरी कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने उपायका बारेमा व्यापक जनचेतनाका सन्देश विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट समेत घरघरमा पुर्‍याउने काम गरेका थियौँ भने ६ वटै वडाका गाउँ, टोलमा ३६ वटा निगरानी समूह गठन गरी विदेशबाट घर फर्किएकाहरुलाई घरपरिवार र छरछिमेकको सम्पर्कमा जानुभन्दा पहिला आवश्यक परामर्श गरी क्वारेन्टिन, सामुदायिक क्वारेन्टिन राख्ने, उहाँहरुको स्वाब सङ्कलन गरी प्रयोगशाला पठाउने र पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउने, गाउँटोलमा लकडाउनको पालना गर्न लगाउने काम त्यतिखेर अलि कडाइपूर्वक गर्‍यौँ ।
गाउँपालिकास्तरीय तथा सामुदायिक क्वारेन्टिन, आइसोलेसनको व्यवस्था गरेर कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारका लागि विभिन्न कदम चाल्यौँ । नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैसँग समन्वय, सहकार्यका आधारमा हामीले कोरोनाविरुद्धका अभियान सञ्चालन गर्‍यौँ । अहिले पनि आवश्यक सचेतना र सावधानीका प्रयास गरिरहेका छौँ । यस भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले नागरिकलाई पनि थाहा भइसकेको महसुस हामीले गरेका छौँ तर पनि गाउँमा कोरोना पूर्ण नियन्त्रणमा नआए पनि अवस्था भने नियन्त्रणमा रहेको महसुस हामीले गरेका छौँ ।
यहाँको गाउँपालिका जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्य नाका पनि हो, कोरना संक्रमणका लागि यहाँहरुले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आयो । यसलाई यहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?
कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने नाका भएका कारण हाम्रो जिम्मेवारी अन्य स्थानीय तहभन्दा अलि बढी नै रह्यो । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सुरुदेखि नै हामीले सतर्कता अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ । यसमा स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार र सबै सरोकार निकायको आवश्यक साथ र सहयोग प्राप्त भयो । यस नाकाबाट भित्रने यात्रु, अलपत्र परेका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका गाउँपालिकाका नागरिकको व्यवस्थापन गर्न स्वयं मलगायत गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि अहोरात्र खटिएर काम गर्‍यौँ । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरु नाकाको हेल्थ डेस्कमा २४सै घन्टा खटेर काम गर्नुभयो । नाकाबाट भित्रने सम्पूर्ण नागरिकको विवरण राख्ने, ज्वरो जाँच गर्ने र उचित परामर्श दिने काम गरियो ।
यो रोग बढी सङ्क्रामक भएको र सारा विश्वलाई आक्रान्त पारेका अवस्थामा हामी नाकामा बसेर त्यहाँबाट भित्रने सबै नागरिकसँग घुलमिल भइ व्यवस्थापन गर्न सामान्य कुरा थिएन । नाकामा २४ सै घन्टा ड्युटी गर्ने अग्रमोर्चा सम्हालेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, लकडाउनको अवधिमा सडकमा बसेर व्यवस्थापनमा खटिने हामी जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य संयोजक, फोकल पर्सन र क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा खटिने कर्मचारीहरु बढी जोखिममा थियौँ । त्यसबेला स्वयं जनप्रतिनिधिहरु पनि अहोरात्र खटिएर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीहरुका साथमा रहेर काम गर्नुभयो । हामी जनप्रतिनिधिसमेत काममा खटिनाले उहाँहरुमा थप आत्मबल बढेको र संक्रमण भित्रन नदिन काम गर्ने ऊर्जा मिलेको अनुभूति गरेका छौँ । स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षाका सम्पूर्ण सामग्री÷उपकरणको समयमै व्यवस्थापन गरिदिँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई अलि सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलेको छ ।
कोरोना भाइरसका बारेमा सबै जना डराइरहेको अवस्था थियो भने नागरिकमा पनि यसको त्रास थियो । यसका लागि हामीले सतर्कता समिति, निगरानी समूह, आमा समूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, संघसंस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक समूहमार्फत समुदायमा व्यापक जनचेतनाका कार्यक्रम लगेर घरदैलोसम्म सूचना तथा सन्देश दिने काम गर्‍याैँ ।
यहाँहरुले गाउँपालिकामा आइसोलेसन पनि तयारी गर्नुभयो । अब त विद्यालय पनि खुलिसके, त्यसको व्यवस्थापन र नयाँ आइसोलेसन निर्माणमा यहाँहरुले के गरिरहनुभएको छ ?
प्रदेश सरकारको सहयोग र कपुरकोट गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा वडा नम्बर ४ स्थित नेरामावि किमुचौरमा स्थापना गरिएको ५० बेडको आइसोलेसन हाल सोही स्थानमा यथावत् राखिएको छ । विद्यालयको पठनपाठनलाई ध्यानमा राखी अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजनामा छौँ । संघीय सरकारको कार्यक्रमअनुसार धनवाङ स्वास्थ्यचौकीमा रहने गरी पाँच बेडका कोभिड विशेष अस्पतालको व्यवस्थापन गरी कर्मचारीहरु पनि नियुक्त गरिसकेका छौँ ।
यहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले र आइसकेपछि यहाँले देखिने गरी गरेका कार्य के–के छन् जसले गाउँपालिकामा तपाईँ आएपछि परिवर्तन भएको जनताले महसुस गरिरहेका छन् ?
हामी कपुरकोटलाई समृद्ध बनाउने दिशातिर अग्रसर छौँ । कपुरकोट गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुने महसुस गरी हामीले सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिसकेर पनि नयाँ भवनबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ । यस्तै यहाँका बस्तीमा खानेपानीको समस्या थियो । यो समस्यालाई टार्नका निमित्त विभिन्न वडाहरुमा लिफ्ट सिष्टमबाट खानेपानी योजना सम्पन्न गरेका छौँ । कतिपय यस वर्ष सुरु भइसकेका छन् । कृषि, पशु र पर्यटनलाई विकास गर्नका लागि विभिन्न शाखा कार्यालयबाट धेरै योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् ।
साथै हरेक वडामा हामीले कृषि सडक, कृषि टहरा निर्माण गरेका छौँ । यसैगरी वर्षौँदेखि हाम्रो मुख्य बजार कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वाराका रुपमा रहेको कपुरकोट बजारमा खानेपानीको चरम अभाव थियो । त्यो अभाव हटाउन हामीले लिफ्ट सिष्टमबाट खानेपानी योजना सञ्चालन गरेका छौँ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट निर्माण गरेर ट्याक्टरबाट नियमित फोहोर उठाइरहेका छौँ ।
तपाईँको गाउँपालिका बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि चर्चित ठाउँ पनि हो । यहाँले बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्द्धनका लागि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि कस्तो योजना निर्माण गरेर लागु गर्नुभएको छ ?
अधिकतम विषादीको प्रयोग भएको स्वीकार्न मिल्दैन । यहाँ विषादी प्रयोगशाला नभए पनि हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार विभिन्न शहरमा पुगेको कपुरकोटको तरकारी तथा फलफुल परीक्षण हुँदा एकदमै खानयोग्य छ । तथापि हामीले सुरुदेखि नै विषादीको न्यूनीकरण र अर्गानीक खेतीमा किसानलाई प्रेरित र सचेत गराइरहेका छौँ । विषादीले मानिस र हाम्रो वातावरणलाई पार्ने असरबारे हामीले पटक पटक अभिमुखीकरण गरेका छौँ । यहाँ कृषि उपज बजार सञ्चालक समिति, कृषक मूल समितिलगायत विभिन्न कृषक समूह छन् । उहाँहरु पनि गाउँपालिकासँगको समन्वयमा कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिक ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी विषादी प्रयोग नगरेरै अर्गानिक तरिकाले खेती गर्न सकिन्छ र कसरी किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लागिरहनुभएको छ । किसानहरु व्यवसायी बन्नुभएको छ र विषादी न्यूनीकरणसँगै अर्गानिक खेतीतर्फ अग्रसर हुनुभएको छ ।
यहाँले कपुरकोट गाउँपालिकालाई चिनाउनका लागि करिब साढे तीन वर्षका अवधिमा केकस्ता गतिविधि गर्नुभयो । साथै गाउँपालिकाका महत्वका विषयलाई कसरी उठान र सम्बोधन गर्नुभएको छ ?
कपुरकोट गाउँपालिका आफैँमा एउटा छुट्टै पहिचान र महत्व बोकेको गाउँपालिका हो । संघीयताको मर्मअनुसार पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि हामीहरू आएर सेवा दिनका लागि उपयुक्त कार्यालय थिएन । स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएका कारण पनि सोचेअनुरूप काम गर्न नसक्नु स्वाभाविक नै थियो । ती सबै समस्याका बाबजुद हामीले पालिकाका वडावडामा धेरै योजनाको डिपिआर बनाएर काम गरिरहेको र अन्य केही योजनाको डिपिआर बनिरहेको छन् । सबै वडामा मोटर बाटोको पहुँच पुगेको छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि समूह, निजी फर्महरूलाई विभिन्न अनुदान दिई कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक तवरमा काम गरिरहेका छौँ । खानेपानीको समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको छ । विद्यालयका समस्या समाधानमा काम गरेका छौँ ।
सीमित साधनस्रोतले असीमित आवश्यकता पूर्ति गर्न कठिन हुन्छ । गरिबी, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी र अज्ञान हाम्रा लागि चुनौती हुन् । चुनावी प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै विस्तारै हामीले विकासको लय लिन थालेका छौँ । हामी जनताका घरआँगनमा गएर तिनका समस्या र आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै विकासको काम अगाडि बढाउँदै आएका छौँ । विकास गर्दा अप्ठेरा स्थितिहरु त आउँछन् नै, तर पनि हालसम्मको अनुभवले ती कठिनाई पार गर्दै अघि बढ्न सफल भएका छौँ । नीतिगत ज्ञान, प्राविधिक समस्याले गर्दा जनअपेक्षाअनुसार विकासमा गति दिन नसकेको कुरा केही हदसम्म हामीले स्वीकार्नुपर्छ । आर्थिक स्रोत र नागरिकमा चेतनाको कमीलाई मैले प्रमुख चुनौतीका रुपमा ठानेको छु । मेरो कार्यकालभित्र देखिने र जनताले महसुस गर्ने गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास र समृद्धिका काम गर्ने गरी योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा छु ।
पहिले गाविस हुँदा जनताले पाउने सेवासुविधा र अहिले गणतन्त्र स्थापना भइ गाउँगाउँमा सिंहदरबारबाट प्रवाह हुने सेवामा कस्तो भिन्नता पाउनुभएको छ ?
गाउँमै अधिकार आएपछि गाउँका जनता जिल्ला, केन्द्रमा विकासका निम्ति धाउने समस्या हल भएका छन् । स्थानीय तहले पाएका अधिकार बढेका छन्, तिनै सेवा जनतालाई प्रदान गरिरहेका छौँ । जनताका आवश्यकता गाउँपालिकाको कार्यालयमा सिधै राख्न पाउनुहुन्छ । हरेक विकासको स्थलगत अनुगमन गरेर वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरी जनताका समस्या जनतासँगै बसेर हल गर्ने गरेका छौँ । कर्मचारीको समस्या पनि सुरुका वर्षमा देखापरेको थियो । अहिले विस्तारै सबै व्यवस्थापन भएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार जनताले जुन रुपले सुविधा पाउनुपर्ने हो, अझै नपाएको देखिन्छ । यसमा हामी लागिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिले जनतालाई चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी सेवा जबसम्म दिँदैन तबसम्म जनताले गाउँमा सिंहदरबर आएको महसुस गर्दैनन् भनेर हामी सबै पक्षको सहकार्य, समन्वयमा महसुस हुने गरी विकास गर्ने प्रयासमा छौँ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि गाउँपालिकावासीले आफूहरुको शासन छ भनेर महसुस गर्नका लागि गाउँपालिकाले मुख्य गरी कुनकुन क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ ? हामीले योजनाको पहिचान, योजना तर्जुमादेखि विकासको प्रतिफल वितरणसम्मका हरेक चरणमा समुदायको निर्णायक सहभागिता बनाउने कोशिश सुरुका वर्षदेखि नै गरिरहेका छौँ । यसले पनि हाम्रा नागरिकले विकासमा अपनत्वको महसुस गरिरहनुभएको छ होला । यहाँका विभिन्न सम्भावनालाई विकासमा बदल्न कृषि, पशु, पर्यटन, शिक्षा, पूर्वाधार, उद्यमशीलतालगायत मानव विकासका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
केही केन्द्र तथा प्रदेशका नीति स्थानीय तह अनुकुल छैनन् । स्थानीय तहमा निर्माण गरेका नीति नियम नागरिकका बीचमा छलफल गरेर बनाइएका छन् । अझै स्थानीयस्तरको मनोभावना र सुहाउँदो नीतिका बारेमा छलफल गर्ने, परिमार्जन गर्ने गरिरहेका छौँ । पुराना कर्मचारीबाट त्यति समस्या भएको हामीले देखेका छैनौँ । तथापि नयाँ कर्मचारी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ । पुरानो अनुभव, नयाँ जोश सबैलाई समायोजन गरेर जनशक्ति परिचालन गरिरहेका छौँ । नागरिकका धेरै समस्या अझै पनि समाधान गर्नुपर्ने छन् । नागरिकको काम छिटोछरितो भइदिए हुन्थो भन्ने हाम्रो चाहना हो । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरको समस्या, भावना बुझेर, हामीसंँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरून् भन्ने अपेक्षा छ ।
योजना प्रभावकारी बनाउन बजेटको सवाल आउँछ, बजेटको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । केन्द्र र प्रदेशले दिने अनुदानको दायरामा रहेर योजना बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । मतदाताका अपेक्षा अनगन्ती छन् तर स्रोत थोरै छ । सोचेजति काम गर्न गाह्रो छ । सीमित स्रोसाधन र भौगोलिक विकटताले बस्तीबस्तीसम्म चाहेको जस्तो विकास पुर्‍याउन समस्या जरुर देखापरेका छन् । समग्र मतदाताले विश्वास गरेर नै मलाई यो स्थानसम्म ल्याइपुर्‍याउनुभएको हो । यसर्थ विकासमा उहाँहरुको सहयोग पूर्ण रुपमा मैले पाएको छु । म सम्भव भएसम्म सबै वडाका समुदायलाई भेट्ने कोशिश गर्छु, विभिन्न कार्यक्रम र अवसरमा । त्यसक्रममा उहाँहरुले आफ्ना गाउँठाउँका समस्या खुलेर राख्नुहुन्छ, केही दिनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । अझै केही सुझाव छन् भने, तपाईँहरुले समस्या ब्यहोर्नुपरेको छ भने खुलस्त रुपमा मसँग राख्न आग्रह गर्छु । रासस
स्थानीय तह अन्तर्वार्ता